कद्दूको चटनीमा मीटबलहरू | बेजिया
कद्दूको चटनीमा मीटबलहरू
यो हामी विश्वास गर्छौं यो साझा गर्न उचित समय हो कद्दू सॉस मा मीटबलहरू जसको रेसिपी हामी लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका छौं। किन? किनभने पछिल्लो अक्टुबरदेखि कद्दू मौसममा छ र हामी सबै मार्केटमा फेला पार्न सक्छौं।
कद्दू यस रेसिपीको स्टार इन्ग्रेडियन्ट हो, जुन योगदान गर्दछ परम्परागत मीटबलहरू कि भिन्न स्पर्श जुन हामी सँधै बेजियामा हेर्छौं ताकि भान्छामा बोर नहोस्। र दुबै कौंचा र कुचिएको टमाटरको प्रयोग गरेर सास तयार गर्नु एकदम सरल छ।
चटनी संग तपाईं यी मीटबलहरू पास्ता व्यंजनहरू, चामल र आलुको साथ पनि सक्नुहुन्छ। यसले तिनीहरूलाई उत्कृष्ट क्रीमनेस र मीठो स्पर्श दिन्छ। र फ्रिजमा एक एयरट्याट कन्टेनरमा राखिएको, यो days दिन सम्म रहनेछ। तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्नेछ!
400० g कीमा बनाइएको मासु (गाईको मासु र सुँगुरको मिश्रण)
पुरानो शहर रोटीको १ टुक्रा
२ m० मिली दूध
१ अण्डो, कुटेको
१/1 सेतो प्याज, बारीक काटियो
G०० g छालाविहीन कद्दू, घन
400 g टमाटर
सॉस तयार गरेर सुरु गर्नुहोस्। यसको लागी प्याज sauté र pan मिनेट को लागि दुई टेबल स्पून तेलको साथ प्यानमा लसुन।
पछि कद्दू सम्मिलित गर्नुहोस्, मौसम र टमाटर थप्नु अघि केहि मिनेट को लागी sauté।
पूरै र मिक्स गर्नुहोस् २० मिनेट पकाउनुहोस् वा कद्दूक बिग्रिन थाल्छ सम्म।
चटनी पकाउँदा, भाँडोमा दूध र रोटीका स्लाइसहरू राख्नुहोस्, ताकि यो राम्ररी भिजेको छ।
त्यसो भए ठूलो भाँडामा मिश्रण अण्डाहरू, नुन, काली मिर्च, प्याज, कीमाएको लसुन, ब्रेडक्रस र पुरानो रोटीको साथ बन्न गरिएको मासुलाई राम्रोसँग समाहित नभएसम्म।
आटाको अंशहरू लिनुहोस् र यसलाई तपाईंको हातहरूले आकार दिनुहोस्। त्यसपछि तिनीहरूलाई पीठोबाट पार गर्नुहोस् र तातो तेलमा खैरो। जसै उनीहरू खैरो छन्, अधिक ट्रेट र रिजर्भ हटाउन शोषक कागजको साथ एउटा ट्रेमा त्यसलाई हटाउनुहोस्। हामीले केवल तिनीहरूलाई खैरो गर्न आवश्यक छ, किनकि पछि तिनीहरू सासमा बनेको समाप्त हुन्छ
एकचोटि सकियो, कद्दूको चटनीलाई म्यास गर्नुहोस् र नुन बिन्दु सच्याउनुहोस्।
मीटबलहरू परिचय दिनुहोस् चटनीमा र cook मिनेटको लागि पूरै खाना बनाउन दिनुहोस्।
कद्दूको चटनीमा तातो मीटबॉलहरूको आनन्द लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » CARNES » कद्दूको चटनीमा मीटबलहरू
प्राकृतिक उपचार तपाईको बच्चाको कब्जको उपचार गर्न